एप्पल चार्जर, सामसु Char चार्जर निर्माता, मोबाइल फोन सहायक उपकरण आपूर्तिकर्ता - एन्जलको पासवर्ड
सामसु Head हेडफोन
सामसु Phone फोन केस
Apple 20W USB-C पावर एडाप्टर यूएस / EU / युके पिन
मूल एप्पल लाइटनिंग हेडफोन A1748
एप्पल मैग्नेटिक म्याग्सेफ वायरलेस चार्जर
एप्पल लाइटनिंग USB USB केबल MD818 मा
वास्तविक एप्पल चार्जर W डब्ल्यू वाल एडाप्टर
Samsung 25W USB-C सुपर फास्ट चार्जिंग यात्रा चार्जर EP-TA800
मूल एप्पल वायरलेस Earbuds १: १ एयर Pods प्रो
एन्गलको पासवर्ड को।, ११ बर्षको लागि इलेक्ट्रोनिक थोकमा सीमित ध्यान र ट्रेडिंग व्यवसायमा years बर्षको अनुभव छ। OEM- वास्तविक चार्जर, केबलहरू, हेडफोन र ब्याट्रीहरू सहित एक्सेसरीहरू, निर्माणबाट एकतर्फी स्रोत र हामी थोक ठूलो मात्रामा धेरै कम नाफा राख्छौं। सबै चीज मूल जस्तो देखिन्छन्, गुणस्तर १: १ वास्तविकको रूपमा र त्यस्तो लामो समयदेखि ठूलो समस्या कहिल्यै भएन। हाम्रा ग्राहकहरू दुबै B2C र B2B मा क्वालिटीमा खुसी छन् राम्रो छ।
हामी केवल मास्टर कार्टन वा खुद्रा प्याकमा उच्च मानक उत्पादनहरू लिन्छौं, जुन मौलिक निर्माणको मानकसँग समान छ।
ठेगाना: कोठा १2०२ (० 05) EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WANCHAI, ह Kongक Kong
यदि तपाई यसलाई अनप्लग गर्नुहुन्न भने के तपाईको फोन चार्जर उपभोग हुन्छ? यसले प्रति वर्ष कति बिजुली खपत गर्छ?2020/12/21
यो विश्वास गरिन्छ कि धेरै मानिसहरु लाई मोबाइल फोन चार्जर प्लग इन बानी छ। यो कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न धेरै सुविधाजनक छ। तर के तपाईंले यसको पछाडि बिजुली खेर फाल्ने मात्राको बारेमा सोच्नुभएको छ? विदेशी मिडिया ZDNet प्रविधि लेखक एड्रियन किंग्सले-ह्यूजेस यस अन्वेषण। उनीसँग घरमा स्मार्टफोन र ट्याब्लेटका लागि char चार्जरहरू छन्, सबै मुख्यमा प्लग इन छन् र फोन चार्ज गरिरहेको छैन। तिनीहरू आफैले कति बिजुली बर्बाद गर्दैछन्?
तपाईको फोनलाई १००% चार्ज गर्नका लागि राम्रो छैन? डाटाले देखाउँदछ कि ब्याट्री जीवन तापमान र चार्ज राशिबाट प्रभावित छ2020/12/21
स्मार्ट फोन विकास अहिलेसम्म प्रदर्शन प्रत्येक बितेको दिनको साथ परिवर्तन भइरहेको छ, तर त्यहाँ एक बिन्दु अहिलेसम्म तोड्न गाह्रो छ, त्यो ब्याट्री हो! किनकि ब्याट्री टेक्नोलोजीले ठूलो सफलता हासिल गरेको छैन, त्यसैले कसरी मोबाइल फोनको उर्जा उपभोगलाई अझ राम्रोसँग नियन्त्रण गर्ने, निर्माताहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। द्रुत चार्जिंग जस्ता त्यस्ता प्रविधिहरूको थप प्रयोग अप्रत्यक्ष रूपमा ब्याट्रीको आयु बढाउन भन्न सकिन्छ, जुन निर्माताहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग गरीरहेको छ।
तपाईको फोनले चार्ज गरेको दरलाई के असर गर्दछ?2020/12/21
के तपाईंलाई कहिलेकाँही मन पर्छ कि मोबाइल फोनको चार्जिंग गती एकदम ढिलो छ? हामी मध्ये धेरै यस अवस्थामा छौं, कहिलेकाँही १००% पछि चार्ज हुँदै, कहिलेकाँही हाम्रो फोनको ब्याट्री लामो समयसम्म प्लग इन भएपछि अपरिवर्तित रहन्छ। तपाईको फोनले चार्ज गरेको दरलाई के असर गर्दछ?
प्रतिलिपि अधिकार © २०२० एन्जल Password ™ s पासवर्ड कं, लिमिटेड। सबै अधिकार सुरक्षित।